Devanagari Newsनेपाल टेलिकमले फोरजी सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाउने — Devanagari News
२१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फोर जी सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाउने बताएको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले टेलिकमको फोर जी सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाउने बताएका हुन् ।
उनले ५ जी सेवालाई परिक्षणमा लैजाने प्रक्रिया आरम्भ गर्ने पनि बताए । प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले देशभरीको फाइबर बिच्छ्याउने कामलाई तिव्रता दिनेपनि उल्लेख गरे । आगामी दिनमा कोरोना संक्रमणका कारण टेलिकमको काम नरोकिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले टेलिकमले कल ट्यापिङ गर्ने हल्ला भएको भन्दै हल्लाको पछि नलाग्न सबैसँग आग्रह गरे । टेलिकमसँग कल ट्यापिङ गर्ने उपकरण नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले टेलिकमले कल ट्यापिङ नगरेको बताए ।
उनले भने, ‘कल ट्यापिङको उपकरण नै छैन । कल ट्यापिङ गर्ने एल आइ. भन्ने उपकरण हुन्छ । त्यो उपकरण आयात गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति चाहिन्छ । हामी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले एल.आइ. इक्वीपमेन्ट किन्न पाइदैन ।’
उनले टेलिकमले सस्तो, गुणस्तरीय सेवा देशभरका सम्पूर्ण भेगमा पुर्‍याउने दायित्वको साथ काम गरिरहेको बताए ।
धागो उद्योगीले भने-डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न सकिन्न
बन्द रहेका क्यासिनो सञ्चालनको तयारीमा
कोभिड महामारीमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुरियर सेवाको भूमिका महत्वपूर्ण : ढकाल
आईक्यान परिषद् पार्षदमा सन्तोष काफ्ले निर्वाचित
राराको मुर्मा टपमा रारा इको रिसोर्ट बन्ने